Dalka Taiwan oo hamblayo iyo gubaabo u diray Somaliland - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Dalka Taiwan oo hamblayo iyo gubaabo u diray Somaliland
Dalka Taiwan oo hamblayo iyo gubaabo u diray Somaliland
Dowladda Taiwan, ayaa dhambaal mahadnaq ah soo gaadhsiiyey Xukuumadda Somaliland, isla markaana sheegtay in labada waddan wadaagaan qiyamka dimuquraadiga iyo madax-bannani u dirirka, sidaa awgeedna ay iskaashi buuxa wada yeelan doonaan, waxaana geesteeda ka hadashay warkaas Somaliland.
Twain ayaa ah dal ka madax banaan dalka Shiinaha laakiin aan aqoonsi buuxa ka haysan caalamka, Somaliland ayaa in mudo ah xiriir gaar ah la lahayd dalka Twain.
Dhambaalka dalka Taiwan u soo diray Somaliland ayaa ka dambeeyey ka dib markii Madaxweyne-xigeenka Somaliland Mudane Cabdiraxmaan Saylici doraad dhambaal u diray, u dhignaa sidan; “Annigoo ku hadlaya magaca Somaliland waxaan hambalo u dirayaa Madaxweynaha Taiwan Marwo Tsai Ingwen, bilaabida xil-gudashadaada labaad adiga iyo Madaxweyne-xigeenkaaga Md William Ching.”
Previous articleSoomaali ku xanibnaa dalka Kenya oo dalka dib loogu soo celiyay.
Next articleSomalia looks to first full elections in 51 years, despite COVID-19 crisis